Iimfuno zikaGannett zokuKhupha iNtloko yayo kwi-Butt yayo | Martech Zone
Iimfuno zikaGannett zokuKhupha iNtloko yayo kwi-Butt yayo
NgeCawa, Agasti 12, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Wonke umntu uvile ngentetho ukuba intloko yakho iphakamise impundu yakho. nge Gannett, Ngokwenyani bazise intetho kwinyani, nangona. URuth Holladay yiblogger ekhohlakeleyo enolwimi olubukhali… kwaye ufile, ngakumbi xa kunjalo iza kuGannett kunye ne-Indianapolis Star.
Sobabini sasisebenza apho, uRuth ethatha umhlala-phantsi kunye nam xa ndikhapha xa uGannett ezisa i-VP eyasusa isebe leetalente liphela.
Ngaba Gannett uyathengiswa?
Amarhe akutshanje kukuba UGannett unokulungiselela ukuthengiswa kungekudala. Andikhathali. Ndithengise isitokhwe sam kwakamsinya nje ukuba ndihambe, ndiqonda ukuba ukumka kwam lolunye uphawu UMontserus Corporititus, kwaziwa njenge ukuba intloko yakho iphakamise impundu yakho.
Kuqala imvelaphi-ndisebenzele imibutho emibini yamaphepha-ndaba-Landmark kunye Gannett. Nangona ezi nkampani zimbini zazifana kumzi mveliso, azinakuba zahlukile kulawulo. Ngelixa uLandmark ekholelwa ekuzimeleni kwiipropathi kunye nabaphathi, uGannett ukholelwa kulawulo.
NjengoMgcini weDatabase kwiphephandaba laseGannett, bendinokhuphiswano kwingingqi nakwinkampani. Kwakungabonakali ngaphandle kwaye ndinobudlelwane obuluqilima kwinkampani - kodwa eyona nto yayikukuba, ukuze baphumelele, kwafuneka bandigxothe kwishishini. Okukhona inkampani ingangqina ngokuxabiseka kwayo ngokwenza izicwangciso zobumbano, kokukhona abasebenzi banokubasusa kwiphephandaba lendawo. Ukuziphilisa kwabo, iibhonasi kunye nokunyuselwa kwabo kuxhomekeke kuyo. Ke, ngelixa ndinokuba namava ngakumbi kwaye ndingumdlali ophumezayo- olo hlobo lolwazi kuye kwafuneka ludlalwe eMcLean, eVirginia.
UGannett ukwenza oku kuwo onke amasebe, ubukhulu becala kuHlelo. Elona thuba likhulu lokukhuphisana neliphi na iphephandaba elinalo kwi-Intanethi kunye nezinye izixhobo zeendaba yitalente yasekhaya. Aba ngabantu abenze ubudlelwane kuluntu kwaye bayazi ukuba zithini iintanda kunye neenkxalabo xa kufikwa kubunkokheli bethu boluntu. Kukwisebe elibonakala ngathi liyancama. Abantu endandingabahlobo babo kuHlelo basebenze iminqwazi yabo imini nobusuku ngeetoni zezikhundla ezivulekileyo ezingasokuze zizaliswe. Uninzi lwazo lumkile ngoku… ilahleko enkulu kwesi sixeko.
Kulula ukubona APHO iZibonelelo ziya khona:
I-Indianapolis Star ngoku ingumxube we-AP kunye neentengiso ezinokufafazwa kwengxelo yalapha phakathi. Iingcali zeshishini ziya kukuxelela ukuba oku kusikwa bekuyimfuneko kuba abantu bajikela kwiWebhu ukufumana iindaba kunye nolwazi lwabo.
Andikwazi ukubeka kumagama indlela endikhathazeka ngayo. Kufana nokutyhola iToyota ngokusilela ukuthengisa kwiimoto zasekhaya. Abasebenzi beGannett Corporate abanamntu banetyala ngaphandle kwabo. Babenethuba lokuphakamisa ukuma kwabo okuqinileyo eluntwini kwaye bakunyuse kokubini kwintengiso kunye nokuhlela. Endaweni yokuba benze iphepha-ndaba lasekuhlaleni liyeke ulawulo kwinkampani.
Ukujonga enye kwi-Indianapolis Star xa kuthelekiswa noGannett kuya kubonelela ngobungqina obucacileyo bokuba izinto zisebenza njani.
Ngelixa uGannett ephumelele amabhaso ngelinye lawona makomkhulu amangalisayo kweli lizwe, i-Indianapolis Star inokuvotelwa yenye yezona zimbi edolophini. Ndaye ndasebenza kwisakhiwo esiqhotyoshelweyo, iSakhiwo saseMelika… esasinamarhe okuba singahlala ngaphandle kwemigangatho embalwa yokuqala. Ndiyaqonda ukuba ayisiyiyo le le umba, ngumbono nje omkhulu wayo.
Kubonakala ngathi imida yenzuzo iqhubeka ngokutsala kunye nelahleko yokujikeleza. Kule ndawo, iNkanyezi iyaqhubeka nokongeza ukuhlelwa kwayo kunye neefoto kunye neebhlog zebhlogi ezivela kubafundi bayo. Ngelixa ndingaphikisi ukuba esi sisigqibo esihle seshishini, kubuhlungu ukubona ukonga kutyhalelwa kwinkampani endaweni yokuba kutyalwe italente yalapha.
I-IndyMoms: Impumelelo yaseKhaya
IndyMoms ngumzekelo wendlela yokwenza izinto ngokufanelekileyo. UMlawuli Jikelele weIndyMoms ngu UJennifer Gombach, umfazi onetalente entle endonwabileyo ukusebenza naye kwiThe Star.
UJennifer akangomthengisi nje onetalente, umbhali kunye nosomashishini, ukwangowasekhaya kwaye ebenephepha-ndaba ixesha elide (kwaye wayejongwa nje). Bendiya kulithanda ithuba lokusebenza phantsi kukaJennifer ngelixesha ndikhona. Wayengumcebisi omkhulu kunye nomhlobo olungileyo.
Ufanele ukwenza ntoni uGannett
Ukuba uGannett unqwenela ngenene ukuyenza, ukudendwa kufuneka kuqala ngabasebenzi babo. Ndiza kuxolisa kubahlobo bam nakwabo ndisebenza nabo ngaphambi kwexesha, kodwa kulapho iingxaki zakho zikhona.
Nikeza iphephandaba lakho lendawo ngokuzimela abafuna ukugcina ishishini. Bavumele ukuba 'batyale imali' kumashishini abo kodwa bababambe banoxanduva. Utyalomali kufuneka lusike kwimida yenzuzo abakhule bayithanda kwikomkhulu kodwa kunyanzelekile. Qalisa ukukhuthaza ngaphakathi kumaphephandaba endaweni yokutshintsha italente kwilizwe liphela.
Jonga okwenziwe nguJennifer nge-IndyMoms. Yeyasekhaya, yeyakho, kwaye intle. Banxibelelane nabafundi kwaye babonelela ngendawo efanelekileyo kubathengisi bendawo ukuba banxibelelane nabantu abathile basekuhlaleni. Yindlela efanelekileyo yokuphumelela kwaye inokuphindaphindwa amaxesha amaninzi ngaphezulu.
UGannett kufuneka akhuphe intloko yakhe ngaphandle kwempundu. Abanye abantu bathi Zonke iipolitiki zezasekhaya! Kwishishini Lamaphephandaba, Zonke iidola zezasekhaya! Andizukubamba umphefumlo wam ndilinde uGannett ukuba azitshise, nangona kunjalo.
I-SQL: UkuKhangela okuPheleleyo kwamaZwe kunye namaPhondo e-US naseCanada
Martech Zone ikwiiNtengiso zeBlogs eziPhambili ezingama-50